Metro Dainik 2077-असार-23 5330
पेटमा प्रकृतिले नै एसिड उत्पादन गराउँछ। हामीले खानासँग खाएको ब्याक्टेरिया मार्नेदेखि लिएर खानेकुरा पचाउने काम यही एसिडले गर्छ। यो एसिड निस्किएपछि यसबाट बच्न शरीरमा आफ्नै ‘मेकानिजम’ हुन्छ ।
ग्याष्ट्रिक हुँदा पेट पोल्ने, दुख्ने, ढ्याउ–ढ्याउ आउनेदेखि लिएर बढ्दै गएमा अल्सरसम्म हुन्छ । अल्सर बिग्रिँदै गएर रगत नै वान्ता हुनेसम्म हुन्छ। मानसिक तनाव धेरै हुनुका साथै चिया, कफी, चुरोट र रक्सीले पनि एसिड उत्पादन बढाउँछ । जथाभावी दुखाई कम गर्ने औषधि र पिरो खानेलाई ग्यास्ट्रिकले सताउँछ ।
- माथिल्लो पेटमा असजिलो महसुस हुन्छ।
-खाना खाएपछि अप्ठ्यारो हुने
-अमिलो पानी आउने
-ढ्याउ ढ्याउ हुने
-ग्याष्ट्रिक बढेर अल्सर भएको भए राती अत्यधिक मात्रामा पेट दुख्छ।
-दिसा कालो र रगत मिसिएको हुन्छ।
के खाने?के नखाने ?
ग्याष्ट्रिक भएपछि उमालेको मात्रै खाने, माछामासु नखाने प्रवृत्ति गलत हो। सन्तुलित भोजन गर्नुपर्छ। लामो समयसम्म भोकै बस्नु हुँदैन। तर, धेरै तातो खानेकुरा भने खानु हुँदैन। मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थबाट बच्नुपर्छ। चिल्लो पदार्थ खानै नहुने भन्ने होइन, आवश्यक मात्रामा खान सकिन्छ।
उपचारग्याष्ट्रिकको पहिलो उपचार भनेको सतर्कता अपनाउने नै हो। सुन्तला, कागती, भोगटे लगायतका फलफूल खानुहुँदैन। डाक्टरको सल्लाह लिएर मात्र औषधि खानुपर्छ, जथाभावी गर्नु हुँदैन।
जँचाएर कुन किसिमको ग्याष्ट्रिक हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ। ग्याष्ट्रिकको प्रकृति हेरेर उपचार गर्नुपर्छ। अल्सर भएको छ भने त्यसको उपचार अलि फरक ढंगले गर्नुपर्छ। ‘एचपाइरल’ भन्ने जिवाणु छ भने त्यो पेटको क्यान्सरसँग पनि जोडिएको हुन्छ। यसको निदान दीर्घकालीन तरिकाले गर्नुपर्छ।
भित्र घाउ भएर रक्तश्राव भएको छ भने यस्तो अवस्थामा रगत समेत दिनुपर्ने हुन्छ। इन्डोस्कोपी गरेर अल्सरमा भएको घाउ उपचार गर्नुपर्छ। औषधिले पनि ग्याष्ट्रिक ठीक नभए शल्यक्रिया गर्नपर्ने हुन सक्छ।
यस्ता छन् कपाललाई मुलायम, चम्किलो र बलियो बनाउनतरिका
यस्ता छन् कपाल झर्न रोक्ने केही घरेलु उपचार
ग्यास्ट्रिकबाट हैरान हुनुहुँन्छ ? यस्ता छन् बच्ने घरेलु उपायहरू
थाहा नै नपाई युवापुस्ता मुटुरोगको चपेटामा
मोयो–नियोविटको आधुनिक उपकरणको प्रयोग शुरु
खाली पेटमा ‘ग्रीन–टी’ फाइदाभन्दा बढी नोक्सान
अनुहारको अनावश्यक रौं फाल्ने सरल घरेलु उपाय
कोरानाबाट बच्ने केही घरेलु उपाय
गर्मीमा घरलाई शीतल बनाउने सरल उपाय
किन गर्ने अनुलोम विलोम ? यस्तो छ अनुलोम विलोमको फाइदा
गर्मी बढ्न थाल्यो : गर्मीमा स्वस्थ्य रहन के गर्ने ?